SomaliTalk.com » SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii | Casharkii I-aad
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Thursday, June 23, 2011 // Jawaabaha waa la xiray
Soomaali-wayn waa erey maqalkiisa uu ku yar-yahay dhegaha inbadan oo kamid ah faca Soomaaliyeed ee maanta nool. Waxaase wax badan ku hadaaqey ereygaan labadii fac ee ka horeeyey faca dhallinyarada ah ee nasiibkoodu noqdey in ay xilligan noolaadaan. Qaar kamid ah Soomaalida ayaa waxay u arkaan ereyga Soomaali-wayn in uu xambaarsan yahay aragti la xiriirta ahaanshaheena dadeed iyo lahaanshaheena daleed. Iyagu waxay tilmaamaan ereygan in uu saldhig u ahaa madax-bannaanidii iyo midnimadii gobollada Soomaaliyeed ee xorta ah. Halka qaar kale oo Soomaalida kamid ah ay u arkaan aragti leysku dulmiyay, taas oo qeyb Soomaalida kamid ah siisay fursad ay kaga sad badsadeen qeybaha kale. Sidaas ayaa ereyga ah Soomaali-wayn, iyada oo ahayd aragti ka soo maaxday dhallinyaro Soomaaliyeed, ayaa misana lagu kala aragti duwan yahay. Laakiin waxaa dhab ah, inbadan oo kamid ah faca maanta jooga in ay ka qatan yihiin ogaalladii ay kaga beeg-qaadan lahaayeen qiimeynta aragtidan iyo waayahii ay bulshada Soomaaliyeed la soo ceyshtey.
Soomaali–wayn, waa laba erey oo leys raacshey. Midka hore waa magac oo waa (Soomaali). Wuxuu caddeynayaa isir iyo absaxan dad leeyihiin, kaas oo ay ku tidcan tahay dhaqan iyo dheef-wadaag aanan saamaxayn in ay ku kala tagaan. Midka danbe waa tilmaame oo waa (Wayn). Wuxuu ka taagan yahay astaan muujineysa awood iyo sareyn. Tilmaanta waynidu waxay u ahaatey Eebe (kor ahaaye). Ereyga waynanka, Eebe marna waa u magac, marna waa u tilmaan. Isaga ayaa wayn, waynaan aanan nuqsaan iyo dhinaansho lahayn. Wixii isaga ka soo hara, waynanka ay sheegtaan waa mid leh xuduud iyo beeg ayan dhaafi karin. Cid kasta oo kale oo waynaan sheegata, waynankeedu waxaa raacsan dhinnaansho.
Soomaalidu marka ay sheeganayeen waynaan oo ay curinayeen ereyga Soomaali-wayn, waxay ahaayeen dad gumoobey oo inta laga itaal roonaadey la addoonsanayay. Xilli waxay ahayd dalkoodii gobollo loo qaybsadey. Ummado ka xoog wayn ayaa inta u soo tashadey, boob iyo dhac ugu yimid. Ummadahaasi shisheeyaha ah, waxay ku habsadeen dhul iyo hanti wixii ay Soomaalidu lahayd. Dabadeed bulshadii Soomaaliyeed waa ay gumeeyeen. Sidaa darteed ereyga Soomaali-wayn, wuxuu ahaa erey ay ku doonayeen han iyo xoriyad. Wuxuu ahaa erey ku mataaneysan halgankii iyo hayaankii bulshada Soomaaliyeed ay ku doonayeen madax-bannaanidii laga mahoobiyay. Aragtidu waxay ahayd mid ay ku ururinayeen awooddooda si ay ula garramaan gumeysigan ka itaalka roonaadey ee dusha kaga fariistey. Isku soo duub oo macnaha ereyga Soomaali-wayn wuxuu ku sidkan yahay yagleylkii ummadeed oo bulsha-waynta Soomaaliyeed ku doonanayeen xaqooda. Ereygu wuxuu ahaa mid ay is-weheshanayeen ereyadii quruxda badnaa oo ay hal-abuureen dhallinyaradii axraarta ahayd ee ka hanaqaadey dhammaan gobollada Soomaaliyeed. Ereyadaas waxaa kamid ahaa SYaxyaa Waddani, Soomaaliya ha Noolaato, Soomaaliyey Toosa, Soomaaliya Soomaali baa leh, Soomaali baan ahay.
Sida la ogsoon yahay falalka weheliya hal-abuurka dhismaha iyo midka bur-burka waxaa adag kan dhismaha. Dhismaha Soomaali-wayn wuxuu ahaa mashruuc ay ku mideysnaayeen Soomaalida inteeda badan, kaas oo halgankiisu uu socdey lix iyo labaatan sano (1943 – 1969). Soomaalidu waxay markaas gaareen riyadoodii ahayd madax-bannaanida iyo midnimada laba gobol oo kamid ah shantii gobol ee loo qeybiyay dhulkii ay ku dhaqnaayeen. Isla halgaankaas ayaa sabab u ahaa in gobolka Jabuuti uu qaato madax-bannaani bishii juun sanadkii 1976-kii. Waxaa kale oo aragtidaas ay sabab u ahayd, calanka midabkiisu yahay beymadow (buluug) ee xiddigta cad dhexda kaga taal, in laga taago War-dheer, Godey, Qabri-dahare Dhagax-buur iyo Jig-jiga. Taasina waxay dhacday bishii july 1977-kii, markaas oo uu socday dagaalkii Ogaadeenya.
Haddii hayaan dheer loo maray dhismaha Soomaali-wayn, waxaa jirta falalkii lagu bur-buriyay in si fudud looga gun-gaaray. Howl socotay muddo saddex sano ah (1991 – 1994) ayaa soo gaba-gabeysey geedkii dowladnimo ee laga dhaxlay facii axraarta ahaa. Labadaas xilli ee midna dhismaha ahaa midna bur-burka ahaa waxaa u dhexeeyay xilli kala-guur (Transitional Period). Waxay ahayd muddo qeybteedna ay sii xoogoobeysey aragtida Soomaali-wayn, qeybteeda kalena waxaa loo xaglinayay dhinaca bur-burka. Muddadaas kala-guurka ah waa 21-kii sano oo dowladdii kacaanka ahayd ay ka talineysey Soomaaliya.
Bulshada Soomaaliyeed xilliga ay ku dhalatay in ay is ururiso waxay ahayd xilli inteeda badan ay xoolo-dhaqato ahayd. Magaalooyinka waa ay ku yaraayeen waana ay yar-yaraayeen. Dadku waxay ahaayeen kuwo ku qatanaa ganacsiga iyo diblomaasiyadda xiriirineysey ummadaha adduunka. Sababtu waxay ahayd, iyaga oo dhaqaale ahaan isku fillaa oo aan dibadda uga baahney wax badan. Xoogaaga ay u baahan yihiin waxaa uga fillaa ganacsatadii tirada yareyd ee degmooyinka xeebaha ah ku dhaqnaa. Bulshada reer miyiga ah waxay lahaayeen aqoon farsamo iyo mid farshaxan oo ay ku dhistaan jaadad walba oo agab ah oo ay adeegsanayeen. Qalabkaas ayaa dhamaantiis waxay ka sameyn jireen dhirta iyo macdanta laga helo gobollada ay ku dhaqnaayeen. Agab tiro badan oo jaadad kala duwan leh ayay sameysan jireen, kaas oo tayo wanaagsan u lahaa noloshooda.
Bulshadu waxay garanaysay waxay yihiin (absaxan iyo ab-tirsi), waxay isku yihiin (xigto iyo xidid) iyo waxay leeyihiin (duddo iyo degaan). Hannaanka xoolo-raacatada ah ayaa wuxuu abuurey in ay duddo ahaan u kala fariistaan. Islamarkaas dhul kala durugsan ay xoolaha ku raacdaan. Inkasta oo ayan jirin dowlad dhexe oo isku tidicda beelaha ay Soomaalidu ka taagneyd, miasana bulsho ahaan waxay ahaayeen kuwo iska war-haya. Wixii dhacdo ah oo gobol la soo dersa, khabarkeedu si fudud ayuu ku gaari jiray gobollada kale. Qaab suugaan ah ama sheeko ah ayay ku kala war heli jireen. Geesinimada iyo isla-weynida waxay ahaayeen labada tilmaamood oo lagu faani jiray bulshada dhexdeeda. Aftahannimada iyo deeqsinimada ayaa qudhoodu waxay kamid ahaayeen tilmaamihii wacnaa oo sida xooggan loo xushmeyn jiray qofkeeda.
Xoogaggii gumeysiga waxay ku xasileen Soomaaliya dabayaaqadii qarnigii XIX-aad. Taasina waxay ka dambeysey markii ay shiiqiyeen dhamaan dhaqdhaqaaqyadii lagu diiddanaa gumeysiga ee ka curtey dacallada dhulkii ay Soomaalidu ku dhaqnaayeen. Waxaa xigey, xoogaggii gumeysiga in mid waliba uu dhankiisa ka bilaabo mashaariicdii cadaadiska ee lagaga daneysanayay Soomaalida iyo hantida ceegaagta dhulka ay leeyihiin.
Soomaaliya waxay markaas si buuxda uga mid noqotay dowladihii qaaradda Afrika ee lagu qeybsadey heshiiskii Berliin. Bulshada Soomaaliyeed waxaa u bilaabatay taariikh madow oo ku soo korortay waaya-nololeedkoodii. Saddex xoog oo ka waawayn ayaa mar qura waxay kala qaateen degaanadii ay ku dhaqnaayeen dadka ku hadla afka Waryaa. Xoogaggaas waxay ahaayeen Faransiis oo qaatay gobolka Jabuuti. Ingiriis oo qaatay gobollada waqooyi iyo Talyaani oo qaatay gobollada Bariga, bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
Reerka keliya oo Soomaalida ay xilligaas u baxsan lahaayeen si ay hiil uga helaan waxay ahaayeen boqortooyadii Xabashida ee dhanka galbeed ka deganayd. Maxaa yeeley xuquuq derisnimo iyo xuquuq xigaalo ayay kala mudnaayeen. Laakiin nasiib-darradu waxay ahayd in iyagii qudhooda uu damac ka galay in ay qayb ka helaan soomaalidan la boobayo. Halkaas ayaa Soomaaliya waxay ku noqotay jasiirad la go’doontay tilmaan ah Agoon Ayaan-daran.
Dowladihii afarta ahaa ee boobka ku qaatay dhulkii ay ku dhaqnaayeen beelaha Soomaaliyeed, kama ayan raagin in mid waliba ay ka faa’iideysato gobolladii ay nasiibka u heshey. Hadba sidii ay uga faa’iideysan lahaayeen hantida ma-guurtada ah ee ceegaagta dhulkaas ayay mid waliba ku dhaqaaqdey.
Faransiiska markii uu gacanta ku dhigay gobolka Jabuuti wuxuu bilaabay qaabkii ugu haboonaa oo uu dakhli kaga samayn lahaa. Wuxuu ku fekerey in uu degmada ka dhiso dekad wayn, taas oo u adeegta gudaha dalka Itoobiya. Islamarkaas wuxuu raacshay dhismo-hoosaad xiriiriya dekadda iyo dhulka gudaha ah. Ujeeddadu waxay ahayd in dekadda loo helo hannaan gaadiid oo wixii ka soo degaya gaarsiiya dhulka gudaha ah, wixii ka dhoofayana ka keena gudaha oo soo gaarsiiya dekadda. Shirkaddii ugu horeysey ee qaadatay dhismaha waddada tariinka ee isku xira Jabuuti iyo Addis-ababa waxaa la yiraahdaa Compagnie Impériale des Chemins de Fer Éthiopiens.
Xubno ka tirsan aqalka boqortooyada ee Itoobiya ayaa si xooggan uga hor yimid dhismihii waddadan. Dad-waynuhuna bannaan-baxyo diidmo ah ayay ku muujiyeen sida ay uga soo hor-jeedaan. Iyagu waxay ahaayeen dad madax-bannaan oo diidi karay wixii ay gar-darro u arkaan. Sidaa darteed waxay ka biya diideen tariinka dhulkooda la marinayo oo hantida ka sameynayaan dad shisheeye ah. Waxaa kaloo diiddanaa dhismaha waddada tariinka, maamulka Ingiriiska ee ka jiray gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Iyagu waxaa u muuqatay in uu hoos u-dhac ku imaanayo adeegga dekadda Seylac oo Ingiriiska gacanta ugu jirtay.
Ugu-danbeyntii Itoobiya iyo Boqorkeedii ahaa Menelik II-aad waa ay oggolaadeen dhismihii waddada tariinka ee xiriirisa Jabuuti iyo Addis-ababa. Wada-hadalka la xiriira dhismaha waddada tariinka, Faransiiska iyo Itoobiya waxay bilaabeen sanadkii 1889-kii. Waa markii la caleema saarey boqor Menelik II-aad. Waxaa si buuxda heshiisku u dhacay sanadkii 1893-kii. Alfred Ilg oo ahaa ijineer u dhashay dalka Swiss ayaa Menelik uga wakiil ahaa wada-hadalka. Isla ninkaas ayaa wuxuu uga wakiil ahaa Menelik, barnaamijkii dhismaha waddada Tariinka. Menelik waa uu diiday in uu wax dhaqaale ah ku bixiyo dhismaha tariinka. Wuxuu kaloo dalbaday, saamiga shirkadda in isaga qeyb lagu magacaabo. Islamarkaas faa’iidada kala-bar uu qaato, isla-markaas is-gaarsiin telegaraaf ah in shirkaddu ay ka dhisto waddada tariinku maraayo. Isaguna wuxuu bixiyay oggolaansho la xiriira in shirkaddu yeelato waddada iyo howlaheeda muddo 99 sano ah.
Faransiiska markii uu oggolaadey shuruudihii Menelik, wuxuu guda-galay in uu dhankiisa ka bilaabo dhismihii tariinka. Shaqaalaha ka adeegayay dhismaha, intooda badan waxay ahaayeen Soomaali. Waxaa weheliyay carab. Injineerada dhismaha iyo maamulka waxay ahaayeen Faransiis. Waxaa weheliyay ciidamo Itoobiyaan ah oo iyagu shaqadoodu ahayd xasilinta nabadgelyada meelaha shaqadu ka socoto iyo in ay ilaaliyaan hantida meesha tiil oo ah qalabkii lagu shaqeynayay. Shirkaddii dhiseysey waddada tariinka waxay ka fogaatay in ay fara-gelin ku sameyso nolosha dadkii reer miyiga ahaa ee ku dhaqnaa dhulka baadiyaha ah ee uu tariinku marayay. Ma ayan dooneyn in kacdoon kaga yimaado dadka reer miyiga ah ee degaanka ku dhaqan. Waxay u daayeen degaanadii iyo ceelashii ay biyaha ka cabayeen. Taasi waxay khasabtay in shirkaddu biyo u doonato ilo kale oo ka fog meelaha ay shaqadu ka socotay. Sidaa darteed, howshii oo aanan gaarin xuduuddii ay sameysteen Faransiiska iyo Itoobiya, ayaa dhaqaalihii loogu tala-galay howsha uu gabaabsi noqday.
Caajis dhaqaale oo ku yimid darteed ayaa shirkaddii waxaa ku yimid howl-gab. Dabadeed howshii waxaa howshii dhismaha ku soo biirey koox saamiley ah oo u dhashay dalka Ingiriirska. Waxay isku magacaabeen New Africa Company. Iyagu waxay mashruucii dhsimaha u raadiyeen saamiyo hor leh. Kadib markii ay dhaqaale u heleen ayay shaqadii dar-dar geliyeen oo muddo dhowr sano ah ay howl adag ka qabteen. Sanadkii 1901-dii, howshii socotay waxaa mar kale ku soo biiray oo dhaqaale ku darsaday saamiley Faransiis ah. Shirkaddii markaas waxay la baxday magaca ahInternational Ethiopian Railway and Constraction Company. Waxay noqotay mid si buuxda ula wareegta dhismaha iyo maal-gelinta waddada tariinka ee la gaarsiinayo Addis-ababa. Qorshaheeda koowaad wuxuu ahaa in waddada ay gaarsiiso degmada Dirir-dhabe.
Taasi waxay dhalisay in ay isku dheehmaan masaalixdii Ingiriiska iyo Faransiiska ay ka lahaayeen geeska Afrika. Iyada oo labada dowladood uu mid waliba damac gaar ah ku jiro ayaa misana maal-qabeennadii saamileyda ahayd waxay ku khasbanaayeen in ay isu kaashadaan dhismaha waddada tariinka. Dabadeed labadii dowladood ee Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa mid waliba waxay bilawday sidii ay uga sad badsan lahayd tan kale. Dalabaadkii iyo cadaadiskii labada dowladood ay ku kala xarig jiidanayeen, waxay ku dhacayeen Imbraadoor Menelik. Taasi waxay sababtay, sanadkii 1902-dii in Imbraddor Menelik uu diido barnaamij la xiriira in waddada tariinka la gaarsiiyo degmada Harar.
Shakiga uu Menelik ka qabay damaca labada dowladood ee waawayn, gaar ahaan Faransiiska ayaa mar walba wuxuu dib u dhigayay wada-hadalka dhismaha waddadan iyo wixii heshiis ah oo si dhakhso ah looga gaari lahaa. Taasina waxay dib u dhigtey xilligii shirkaddu ay ku bixin lahayd deymankii laga doonayay in ay soo celiso. Waxaa lagu khasbanaa in waddada si deg-deg ah lagu gaarsiiyo degmooyinka waawayn oo loogu tala-galay in ay u adeegto si loo helo dhaqaale u soo laabta saamileyda. Taasi waxay albaabada u furtay in Ingiriiska iyo Faransiiska ay isu tanaasulaan oo isu soo dhowaadaan.
Sanadkii 1904-tii ayaa labada dowladood ee imbriyaaliga ahaa waxay dhigteen heshiis is af-garad oo isu soo dhoweynaya aragtiyaalkii guud oo ay isku diidanaayeen. Heshiiskaas oo labada dowladood ay kala saxiixdeen 8/ 4- 1904-tii, ayaa wuxuu ahaa mid ay ku hagaajinayaan khilaafaadkii badnaa oo ka haystay dhamaan waddamada cari-edeg oo ay gumeysanayeen. Kama marayn heshiiska in uu wax ka taabto dhismaha waddadan. Inkasta oo heshiisku uu iridaha u furay maal-gelin mideysan in Ingiriiska iyo Faransiiska ay kaga qeyb-qaataan dhismaha waddada, misana caqabado ayaa ku yimid howlihii shirkadda. Sidaa darteed sanadkii 1906-dii shirkaddii fallis ayaa ku dhacay.
Sanadkii 1908-dii, hantidii ay shirkaddu lahayd waxaa lagu wareejiyay shirkad cusub oo la yiraahdo Compagnie de Chemin de Fer Franco-Ethiopien de Jibuti à Addis Abeba, taas oo oggolaansho u heshey in ay dhismaha waddada tariinka gaarsiiso magaalada Addis-ababa. Dood iyo khilaaf sanad socday oo dhex-martay hantiilayaashii hore iyo shirkadda, dabadeed waxaa dib loo bilaabay dhismihii waddada tariinka. Sanadkii 1915-kii waddadii waxay gaartay degmada Akaka-beseka oo Jabuuti u jirta 763 km. Addis-ababana u jirta 23 km. Bishii juun 1917-kii waddadii tariinka waxay gaartay Adis-ababa. Halkaas ayaa waxaa ku xasilay istraateejiyaddii siyaasadeed oo Faransiiska uu u qabsaday gobolkan Soomaaliyeed.